Shengxin Sports esetịpụ aka na Youfa Group, na ya uru zuo ezu onye ọ bụla ọzọ na-achọ ngwa ngwa development. - China Tianjin Shengxin Sports ngwongwo
Shengxin Sports esetịpụ aka na Youfa Group, na ya uru zuo ezu onye ọ bụla ọzọ na-achọ ngwa ngwa development.
Na-aga n'ihu mma nke ndụ ndị mmadụ ka ụkpụrụ na ume ịrị elu nke mba mma ije, na mmepụta nke egwuregwu na ngwa ga-aghọ a ọwụwa anyanwụ ụlọ ọrụ, na ahịa ohere ga-aghọ ihe na ọzọ sara mbara. The isi ngwaahịa nke Youfa Group, welded ígwè ọjà, bụ isi akụrụngwa n'ihi egwuregwu ngwá. Ọ bụ nke a ndabere na Shengxin Sports na Youfa Group ọma enweta nkwado dabeere na ụkpụrụ nke inyerịta complementarity, ibe uru na nkwanyerịta uru: Youfa Group ka nyekwara na Shengxin Sports na nwere management pesonel na ọgaranya management ahụmahụ. Iji nye venues maka ịgbasa arụmọrụ, niile nchara ọkpọkọ chọrọ maka Shengxin Sports na-zụrụ si enyemaka nke Youfa Group.
The imekọ ihe ọnụ nke a ngo na-abụghị nanị ohere maka Shengxin Sports ike ike ya na-eme ya mmepe nwere na ịzụlite ngwa ngwa. Ọ bụkwa na-arụsi ọrụ na-aba uru mgbalị ndị Youfa Steel Pipe Industry Chain ịgbatị downstream na-abanye na egwuregwu ngwá ụlọ ọrụ.
Post oge: Jul-19-2018